Home › What's New › Press Release:CELEBRATION OF 3rd INTERNATIONAL DAY OF YOGA (25 June 2017)
Press Release:CELEBRATION OF 3rd INTERNATIONAL DAY OF YOGA (25 June 2017)
To mark the 3rd International Day of Yoga, the Embassy of India in Yangon organizedaYoga demonstration cum performance at the People’s Park, Gate No.1, Pyay Road, on June 25, 2017 (Sunday) from 0800 - 10.00 hrs.
The event included performance of common yoga protocol which was participated from (12) yoga associations/practitioners in Myanmar. Along with the programme, the Yoga instructors commanded on each posture and benefits of Yoga for well being and fitness.
Yoga embodies unity of mind and body, thought and action, restraint and fulfillment, harmony between man and nature, andaholistic approach to health and well being. The United Nations General Assembly on December 11, 2014, designated June 21 as the 'International Day of Yoga' recognizing the benefits of practicing Yoga for holistic approach to health and well-being of the world's population.
The Embassy of India also organizedanumber of events such as the quiz contest on Yoga & Naturopathy on 18th June, 2017, Essay writing contest on 22nd June, 2017 as curtain raiser events before our main event at various venues like Peoples Park, Maha Bandula Park, Kyaikkasan Sports Stadium, Mawlamying, Taungoo, Zeyawaddy, Sittwe and Mandalay.
တတိယအကြိမ်မြောက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာယောဂနေ့အခမ်းအနားအား အိန္ဒိ ယသံရုံး၊ရန်ကုန်မြို့မှ ကြီးမှူးစီစဉ် ၍ ယောဂသရုပ်ပြပွဲနှင့်လေ့ကျင့်မှုပြပွဲတစ်ရပ်အား ရန်ကုန်မြို့ပြည်လမ်းရှိ ပြည်သူ့ဥယျာဉ် ၂၀၁၇ခုနှစ် ဇွန်လ ၂၅ရက် (တနင်္ဂနွေနေ့) နံနက် ၈နာရီမှ၁၀နာရီထိ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
တတိယအကြိမ်မြောက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာယောဂနေ့အခမ်းအနား၂၀၁၇သို့ မြန်မာနိုင်ငံသာသနာရေး နှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး သူရဥင်္ီးအောင်ကို အပါအဝင် အရာရှိကြီးများနှင့် ရန်ကုန်မြို့ရှိယောဂသင်တန်းများမှ စိတ်အားထက်သန်သူများ တက်ရောက် ခဲ့ပါသည်။
အခမ်းအနားတွင်မြန်မာနိုင်ငံရှိ်ယောဂအဖွဲ.အစည်း (၁၂) ဖွဲ.မှယောဂလေ့ကျင့်သူများပါဝင်လျှက် အခြေခံယောဂကျင့်စဉ်များကို သရုပ်ပြကစားခြင်းလည်း ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။ အစီအစဉ် ကျင်းပနေစဉ်တွင် ယောဂသင်တန်း ဆရာများမှ လေ့ကျင့်ခန်းတခုစီအတွက် ညွှန်ကြားပြသခဲ့ကြပြီး ကျန်းမာ ကြံ့ခိုင်ရေးအတွက် ယောဂ၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုဟောပြောခဲ့ကြပါသည်။
ယောဂသည် စိတ်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်၊ အတွေးနှင့်လှုပ်ရှားမှု၊ ချုပ်တည်းကန့်သတ်မှုနှင့်ပြည့်ဝမှုတို့ကို ညီညွတ်မျှတမှုရှိရန် ချိတ်ဆက်ပေးပါသည်။ လူသားနှင့်သဘာဝ၊ ကျန်းမာရေးနှင့်နေထိုင်ကောင်းရေးကို လုံးလုံးလျားလျားကြီး ဟန်ချက်ညီမျှအောင် ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ ယောဂသည် လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခု အဖြစ်သာမက ကမ္ဘာ ကြီးနှင့်သဘာဝတရားတို့ ပေါင်းစည်းကာ တစ်ခုတည်းအဖြစ် ဖြစ်တည်လာစေရန် ကြိုးပမ်းမှုလည်းဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ လူသားတို့၏ ကျန်းမာရေးနှင့်ကြံ့ခိုင်ရေးအတွက် ယောဂလေ့ကျင့်ခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများအား သိရှိကြပြီးနောက် ၂၀၁၄ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၁ရက်နေ့တွင် ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံ ကြီး ၌ ဇွန်လ ၂၁ရက်နေ့ကို “အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ ယောဂနေ့” ဟူ ၍ တည်ထောင် သတ်မှတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခဲ့ကြပါသည်။
တတိယအကြိမ်မြောက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာယောဂနေ့၏ အဓိက အခမ်းအနားများကို ပြည်သူ့ဥယျာဉ်၊ မဟာဗန္ဓုလပန်းခြံ၊ ကျိုက္ကစံအားကစားကွင်း၊ မော်လမြိုင်၊ တောင်ငူ၊ ဇေယျဝတီ၊ စစ်တွေနှင့် မန္တလေး စသည့်နေရာများတွင် ကျင်းပခြင်းမပြုမီ အိန္ဒိ ယသံရုံး၊ရန်ကုန်မြို့မှလည်း အကြိုအခမ်းအနားများအဖြစ် ယောဂနှင့်သဘာဝကုထုံး ပဟေဠိပြိုင်ပွဲကို ၂၀၁၇ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၈ရက်နေ့တွင်လည်းကောင်း၊ စာစီစာကုံးပြိုင်ပွဲကို ၂၀၁၇ခုနှစ် ဇွန်လ ၂၂ရက်နေ့တွင်လည်းကောင်း ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
၂၀၁၇ခုနှစ်၊ ဇွန်လ၊ ၂၅ရက်။